Showing ४१-५० of ६,७०९ items.
काँग्रेस सुनसरी क्षेत्र नं १ को नेतृत्व चयनका लागी धरान सभागृहमा निर्वाचन हुँदै
नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत आज क्षेत्रीय कार्यसमितिको लागी निर्वाचन भइरहेको छ । सुनसरी क्षेत्र नं १ को नेतृत्व चयनका लागी बिहान ९ बजे देखि धरान ८ स्थित सभागृहमा मतदान सुरु भएको छ । चुनावमा संस्थापन समूहबाट सभापतिमा महिला नेतृ लक्ष्मी खतिवडा र संस्थापना इतर समूहबाट सुजेन्द्र तामाङको नेतृत्वमा प्यानले रहेको छ । संस्थापना इतर समूहका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाएर प्रचार प्रसार गरिएको भए पनि अन्तिम समयका राईले उक्त प्यानलबाट उम्मेदवारी नदिने भनेपछि संस्थापना समूहले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी लक्ष्मी खतिवडालाई सभा
श्रम शोषण गर्दै ट्रान्स नेपाल, श्रमिक आन्दोलित
विराटनगर / एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) विराटनगरमा कार्यरत श्रमिकहरूलाइ ट्रान्स नेपाल थ्रेड सर्भिस प्रालिले श्रम शोषण गरेको भन्दै आन्दोलित भएका छन् । ट्रान्स नेपाल अन्र्तरगत रहेर काम गर्ने श्रमिकहरूले राज्यले तोकेको श्रम ऐन अनुसार सेवा सुविधा नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । ट्रान्स नेपाल अन्र्गत विराटनगर भन्सारमा करिब ३ सय जना श्रमिक रहेका छन् । उनीहरूले श्रम ऐनले तोके अनुसारको सेवा सुविधा नपाएको भन्दै सोमबार आइसीपी बाहिर पत्रकार सम्मेलन गरि आन्दोलनमा उत्रिने चेतवनी दिएका छन् । श्रम ऐन अनुसार सेवा सुविधा माग्दै विभिन्न चरणको छलफल र बार्ता बस्दा पनि ट्रान्स नेपालले श्रमिकको मा
प्रदेश १ मा दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढ्दै
सुनसरी । प्रदेश १ मा सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने र घाइतेहरूको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढेको छ । ज्यान जाने गरी दुर्घटना हुनुका मुख्य कारणहरू चालकको लापरबाही, तीव्रगति, मापसे रहेको छ । प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीको पछिल्लो तीनवर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा प्रदेश नम्बर १ मा ८ हजार ३ सय ४० सवारीसाधन दुर्घटना हुँदा चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा ९ सय २६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । तीमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३ सय ३२ जना, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४ सय ४४ जना र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा १ सय ५० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका अनुसार गत क
बालिकालाई बलात्कार गरेर फाल्ने यौन पिपासु पक्राउ
विराटनगर । मोरङको कटहरी गाउँपालिका – ७ की चार वर्षीय एक बालिकालाई बलात्कार गरेर फाल्ने यौन पिपासु पक्राउ परेका छन् । भारतको अररीया घर भई कटहरीमा बस्दै आएका २४ वर्षीय मुकेश सरदारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका सरकारले घरमा खेल्दै गरेको बालिकालाई कटहरी ७ मा रहेको लोहन्द्रा खोलामा लगेर शनिबार राती ८ बजे जबरजस्ती करणी गरेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी दिपक श्रेष्ठले जानकारी दिए । श्रमिक काम गर्ने सरकार शनिबार साइकलमा डुल्दै ती बालिकाको घरतिर आएका थिए । बालिकाका बाबुआमा खेती किसान गर्दछन् । अहिले धान थन्काउने सिजन भएकोले उनीहरू मेलापातमा गएका थिए । ‘त्यस दिन घरमा ती बालिका एक्लै
दुर्घटनाको निश्पक्ष छानबिनको लागि सडक अवरुद्ध
लक्ष्मीमार्ग । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तरगत मोरङको सुन्दरहरैचा स्थित सलकपुरमा गए राति बलराम माझिको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ ।सशस्त्र प्रहरी क्याम अगाडि अन्दाजी ११ः५५ बजे सुन्दरहरैचा ११ का बलराम माझिको दुर्घटना हुँदा छेउमै रहेको प्रहरीले थाँहा नपाएको र दुर्घटना गराएर फरार भएको भन्दै यथाशीघ्र पक्राउ गर्न माग गर्दै मृत्युका आफन्त र स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेका हुन् । करिब एक घण्टा सडक अवरुद्ध पश्चात् पिडित पक्ष र प्रहरी विच सहमति भएर सडक सुचारु भएको इलाका प्रहरी कार्यलय बेलबारीका प्रहरी निरिक्षक सरोज खनालले बताए ।
बार एसोसिएसनले बुझायाे सभामुखलाई ज्ञापन पत्र
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन माग राख्दै बारका आन्दोलनरत प्रतिनिधिले सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । उनले निष्पक्षता, तटस्थता र स्वतन्त्र रूपमा पहल गर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘तीन वटै अंगको ओज गरिमा कायम हुनुपर्छ । अहिले भइरहेको बहस नजिकबाट हेरेको छु ।’ उनले जारी बहसबाट निकै राम्रो निष्कर्ष निस्किने र सहज र स्वभमिविक निष्कर्ष निकाल्न सबै पक्ष गम्भीर हुनु
तिलक राई पछि हटेपछि सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ को सभापतिमा खतिवडाको उम्मेदवारी घोषणा
नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन अन्तरगत सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ को सभापतिमा उम्मेदवारीका रूपमा अघि सरेका धरान उपमहानगरपालिका का प्रमुख तिलक राईपछि सरेका छन् । क्षेत्र नम्बर १ क र ख मा संस्थापना पक्षको कमजोर उपस्थिति देखिएपछि राई चुनावबाट ब्याक भएका हुन् । राईले उम्मेदवारी नदिने भएपछि उक्त पक्षको प्यानलबाट लक्ष्मी खतिवडा उम्मेदवार हुने भएकी छिन् । संस्थापना इतर समूहका राई संस्थापन पक्षको सहयोगमा उम्मेदवार हुने पक्का पक्का भयसँगै त्यसै अनुरूप प्रचार प्रसारमा समेत लागेका थिए । "व्यावहारिक समस्याका कारण उम्मेदवारी फिर्ता लिएको भन्नु भएको छ, हार जित भन्दा पनि अन्य राजनीतिक कु
रेफरल केन्द्र बीपीबाटै सिटीस्क्यान गर्न रेफर
धरान । प्रदेश १ को रेफरल केन्द्र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिटीस्क्यानका लागि अन्यत्र रेफर गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सकेको छैन । यो समस्या अहिले झनै बढेको छ । दैनिक २० देखि ३० जना बिरामीलाई प्रतिष्ठानले सिटीस्क्यानका लागि विराटनगर तथा अन्यत्र रेफर गर्ने गरेको छ । यो समस्या अन्त्य गर्नका लागि प्रतिष्ठान आफैले सिटीस्क्यान मेसिन आपूर्ति गर्ने गरी ‘एलसी’ खोलेको थियो । उक्त मेसिन आपूर्ति भएको छ तर, उक्त मेसिन आपूर्ति गर्ने कम्पनी म्याक्स मेडिटेकका सञ्चालक जीवन उप्रेतीले भने सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको प्रावधान र प्रतिष्ठानसँग गरेको सम्झौताभन्दा १० महिनापछि मात्र ल्याएका हुन् । प्र
मासु व्यवसायी हत्या आरोपमा अर्का मासु व्यवसायी पक्राउ
बिर्तामोड/ झापाको बिर्तामोडमा असोज २४ गते राति भएको मासु व्यवसायीको हत्या प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । बिर्तामोड उत्तरको महानन्दचोकमा मासु व्यवसाय गर्ने इन्द्रकुमार मगरको हत्या ‘मैले गरेको’ भन्ने सोही स्थानका व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीले शुक्रबार राति ९ बजे सोही स्थानमा खसीको मासु बिक्री गर्ने टीकाराम थापा र उनको पसलमा कार्यरत धु्रव बुढाथोकीलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरूमध्ये थापाले मादक पदार्थ सेवन गरेको समयमा मगरको हत्या आफैले गरेको भनेको प्रहरीले जनाएको छ । ‘माल्दाइ मासु पसल’ का सञ्चालक थापाले मगरको भाइ सन्तोष
भीम रावलले गरे एमाले अध्यक्षमा उम्मेदवारीकाे घोषणा
नेकपा एमाले उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चितवनमा हुन गइरहेकाे एमालेकाे १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारीकाे उपाध्यक्ष रावलले औपचारिक उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।उनले पार्टीलाई सुदढ र प्रभावकारी तुल्याउन अध्यक्षमा उमेदवारी दिने घाेषणा गरेकाे भन्दै कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुमा सहयोग र समर्थनका लागि आह्वान पनि गरेका छन् । ‘अध्यक्षको पदमा मलाई आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गरी पार्टीलाई नयाँ चरणको प्रगति र सशक्त भूमिकामा अघि बढाउन तथा नेपाल नेपाली जनताको आकांक्षा